HAMBALYO ..MEHERKA..CABDIRAXMAAN MAXAMED CALI IYO DEEQA SICIID MAXAMUUD oo meherkoodu ka dhacay 10.8.13 magaaladda London | Salaan Media
HAMBALYO ..MEHERKA..CABDIRAXMAAN MAXAMED CALI IYO DEEQA SICIID MAXAMUUD oo meherkoodu ka dhacay 10.8.13 magaaladda London
Waxa shalayto ka dhacay Hotel Blue Ocean ee ku yaala Galbeedka London kulan Meher ah oo la isku arkay,Kulankaas oo ay kasoo qaybgaleen Odayaal,Mutacalimiin,Siyaasiyiin iyo dhalinyaro degan magaaladda London oo aad u fara badan.
Waxa dhamaan dadka madasha Meherka joogay iyo intii aan soo gaadhin inay kasoo qaybgalaan ay HAMBALYO u dirayaan .
CABDIRAXMAAN MAXAMED CALI IYO DEEQA SICIID MAXAMUUD oo meherkoodu ka dhacay 10.8.13 magaaladda London,Waxa aan Illahay uga baryaynaa inuu ka dhigo labadii isku raaga oo ubad khayr qaba kala hela. Amiin
Shabakadda Salaanmedia guud ahaan waxay Hambalyo taa la mid ah u dirayaan lamaanahan Meherkoodu ka dhacay London.
Waxa kale oo Tacniyadaas oo kale u diraaya, Hooyo Amina Muuse Caateeye,Hooyo Xaali Cilmi Jibriil iyo dhamaan Ilma Axmed Salaan,Xaasaskooda iyo caruurtooda oo tahniyad taa la mid ah iyana u diraaya Meherka CABDIRAXMAAN MAXAMED CALI (SHIINE)IYO DEEQA SICIID MAXAMUUD,Waxayna Ilaahay uga baryayaan khayr bash-bash iyo Barwaaqo.
Marlabaad dadka muuqaalkoodu sawirka ka muuqdo marlabaad waxay u dirayaa Meherka Hambalyo Hambalyo